Wafdigii Madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo oo dalka dib ugu soo laabtay . – Balcad.com Teyteyleey
Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya oo booqasho labo cisho qaadatay ku joogay dalka Sudan ayaa maanta gelinkii dambe dib ugu soo laabtay Caasimada Soomaaliya ee magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa waxaa garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Aadan Cadde ku soo dhaweeyay mas’uuliyiin ka tirsan labada aqal, maamulka gobolka Benaadir iyo saraakiisha ciidamada qalabka sida.
Dhanka kale Madaxweyne Farmaajo ayaa intii uu ku sugnaa Sudan wuxuu la kulmay Madaxweynaha dalkaasi Sudan Gen. Cumar Xasan Albashiir oo ay ka wada hadleen xaaladda guud ee dalka, iyagoo kala saxiixday heshiisyo dan u ah labada Dowladood.
The post Wafdigii Madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo oo dalka dib ugu soo laabtay . appeared first on Ilwareed Online.